Sandals Resorts Inozivisa Kuwedzera kuCuraçao
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Curacao Kuputsa Nhau » Sandals Resorts Inozivisa Kuwedzera kuCuraçao
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Curacao Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Sandals Resorts International (SRI), inotungamira pasirese zvose-sanganisira kambani, yazivisa nhasi kusaina chibvumirano chinounza Sandals® Resorts kunzvimbo nyowani, kuSanta Barbara Resort pachitsuwa cheCuraçao.
Izvi zvinoratidza mucherechedzo wechipfumbamwe kuenda kwechiratidzo munzvimbo yeCaribbean. Iyo nyowani Shangu Curaçao ichatanga kusanganisira mazana matatu-emakamuri emhando yepamusoro uye masuti akatambanudzwa pamwe neSpanish Water Bay neCaribbean Sea, iine kumwe kuwedzera kuri kurongwa mumakore anotevera. Yaimbove Santa Barbara Beach & Golf Resort, chikamu chekupamhama kwema350-maeka, iyo nzvimbo ichave yakazara "Yakapwanywa," chirongwa chinotarisirwa kutanga muna 3,000.
Sandals Curaçao inounza hunyanzvi hwekushongedza chitsva kuchitsuwa, icho chakave chakafanana neye inozivikanwa pasi rese chiratidzo cheSandals Resorts mudunhu rese. Zvirongwa zvekufungidzira zvinosanganisira kuwedzera zvinhu zvakakosha zvechiitiko cheSandals, kusanganisira madziva matsva, dzakasiyana siyana dzekudyira dze5-Star Global Gourmet ™ nenzvimbo dzakashongedzwa, kusanganisira yakanaka kwazvo ichangovakwa River Suites. Vashanyi vanozowanawo nharaunda ye18-hole Pete Dye mukwikwidzi wegorofu, mairi maviri epamhepo uye 38,000-mativi mana emakamuri epamba neyekunze, hombe pachiwi.
Curaçao ine mukurumbira wepasirese nekuda kwehunhu hwayo hwakanaka, mahombekombe akajeka uye makoveshi, inewo nzvimbo dzinoyevedza dzekushambira uye zvisikwa zvemugungwa zvekunze. Iine tembiricha yegore-inotenderera yemadhigirii makumi masere, inoitwa seyakakwana chero nguva-kutiza. Iyo yekutandarira ichave yakanaka, nekukasira uye kwenguva refu kukanganisa pachitsuwa uye nevanhu veCuraçao. Mugore rimwe chete, zvinotarisirwa kuve neinopfuura madhora makumi mana emamiriyoni ezvehupfumi uye rekodhi inonakidza pakusikwa kwemabasa matsva. Iyo nzvimbo yekutandarira yega ichawedzera pamusoro pezviuru chiuru nemazana emabasa emuno, anosanganisira mazana mazana enhengo dzechikwata, uye mazana mana evatengesi vemuno nemhizha. Izvi zvichateverwa neyakajeka hupfumi hwenzvimbo nharaunda dzinosvika kumatunhu emunharaunda nematekisi, kutengeswa kwakakura, kurima, kuwedzerwa kwendege uye kuwedzerwa nhamba dzevashanyi dzegore- kunyanya nemusika wakakosha wekushanya weUS.
Roald Smeets, director weSanta Barbara Beach & Golf Resort, akati: “Tine mukana wakasiyana wekukwezva mushandi wepahotera anozivikanwa pasi rose, muridzi uye muzvinashawo mari akaita seSandals Resorts, ayo achaunza rombo risingaenzaniswi muindasitiri yekushanya yeCuraçao uye hupfumi hwenzvimbo. Chinzvimbo chayo sevashandisi vehotera uye muridzi, nekwanisi yekukwezva ndege dzese dzakarongwa kubva kuNorth America, zvinonyatsozvitaridza kubva kune mamwe mapoka ehotera. Takawana zvirongwa zvaro zvinonakidza zvesaiti uye kuzvipira kuvaka chimiro cheCuraçao senzvimbo yepasi rose yekushanya inokwezva zvikuru. Kuisa mari kwayo mune ramangwana kunovandudza musika wekushanya, kuchengetedza raramo yemazana emhuri uye kubatsira munhu wese pachitsuwa kuburikidza nekumutsiridza hupfumi hwenzvimbo. Curaçao ine ramangwana rakajeka kumberi, nekuda kwechiitiko chitsva ichi chinonakidza, chinoisa Curaçao zvechokwadi padanho repasi rose.
Sandals Resorts International Muvambi uye Sachigaro, Hon. Gordon "Butch" Stewart, pamwe neMutevedzeri Wachigaro, Adam Stewart, vane izvi zvekugovana: "Wanga uri mufaro wedu wakasiyana kushanda pamwe nehurumende yeCuraçao nemhuri yekwaSmeets pachiitiko chitsva ichi chinonakidza cheSandals brand," akadaro Gordon " Butch ”Stewart. “Tinoshuvira kuratidza kutenda kwedu kukuru kuna Roald Smeets, uyo akabatsira mukuita uku uye anofadza chose kushanda naye. Tiri kuronga kuita zvinopfuura chikamu chedu kusimudzira kukoshesa kwenyika nyika ino yakanaka. "
Adam Stewart akawedzera kuti: “Nguva imwe neimwe yatinowedzera, tinounza nekwaniso izere yemakumi mana emakore-edu mukugamuchira vaeni. Iyo nyowani yeSandals Curaçao inoratidzira huzivi hwedu hwemberi-kufunga uye kutarisa kuburikidza nelenzi nyowani. Icho chivimbiso kwete chete kuvashanyi vedu asi kunhengo dzechikwata chedu chekuenderera mberi nekuvandudza. Curaçao inzvimbo inowanikwa, uye nhasi tinodada kuva chikamu chenharaunda ino. ”
Kuzorora uye Kubayiwa muGuam kwevashanyi veTaiwanese